कमल अर्यालको उत्तरकी अप्सरा सार्वजनिक ! – .:: Welcome to Saurahaonline.com
कमल अर्यालको उत्तरकी अप्सरा सार्वजनिक !
भरतपुर, १५ मंसिर । युवा लेखक कमल अर्यालको नयाँ कृति उत्तरकी अप्सराको विमोचन गरिएको छ । नारायणगढ स्थित सम्पूर्ण किताबको हलमा शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि कृतिको विमोचन गरिएको हो । कृति यात्रा साहित्य हो ।
अर्यालको लेखन सुललित छ । उनको लेखनमा साहित्य छल्किएको छ । कृति माथि बोल्दै समीक्षक एलबी क्षेत्रीले भने – चितवनबाट प्रकाशित यात्रा साहित्यका कृति मध्य अर्यालको कृति यात्रा साहित्यको अब्बल किताब हो । समीक्षक रामबाबु घिमिरेले कमलको लेखनले सगरमाथा छुन सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने बताए । अहिलेको लेखनी हेर्दा उनिबाट यात्रा साहित्यका अझै राम्रा कृति आउने संभावना जिवित छन् – घिमिरेले भने । उनको ब्यक्तित्व र कृतित्व माथी केशवराज आमोदी, धनराज गिरी, उदय अधिकारी, भूपिन, राजेन्द्र पराजुली, डिएन अर्याल, विजय विश्वकर्मा, लेखराम सापकोटा लगायतले पनि बोलेका थिए ।
अर्याल विशेषगरी गजल लेख्छन् । गजल गायनमा पनि उनको विशेष दखल छ । गजल लेख्दालेख्दै लेखन बृत्तलाई फराकिलो बनाएका उनले सगरमाथाको आधारशिविर घुमघामका क्रममा बटुलेका अनुभवलाई यात्रा साहित्य भनेर संकलन गरेका हुन् । उनका यसअघि तिमी आउनु अघि, तिमी आएपछि र लौरो गरि तीन गजल संग्रह प्रकाशित छन् ।
नित्यराज पाण्डे प्रज्ञा पाण्डे प्रतिष्ठानद्वारा कुरिनटारमा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रम	२४ चैत्र २०७५, आईतवार २३:५६
सौराहामा दोस्रो मेडिकल लिटरेचर मेला सुरु,	१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार १४:४९
चितवनमा आजबाट दुई दिने मेडिकल लिटेरेचर मेला हुँदै	१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार १०:०९
खनालको स्मृतिमा पुस्तक लोकार्पण	१० चैत्र २०७५, आईतवार १८:००
साहित्य : ए पुरुष ! एकल होइन, सम्भोगमा विश्वास गर	४ चैत्र २०७५, सोमबार १२:४२
साताको साहित्य पुरस्कार : कवि नविन प्यासीको कृति आर्शिवादलाई	२ चैत्र २०७५, शनिबार २२:३५